Farmaajo oo raalli galin u tagaya Imaaraadka | KEYDMEDIA ENGLISH
Farmaajo oo raalli galin u tagaya Imaaraadka
Farmaajo ayaa ku wajahan dalka Imaaraadka, halkaasoo uu u tagayo, ka cudur-daarashada khilaaf dano shaqsiyadeed ku dhisan oo uu isago abuuray, kaas oo ugu danbeyn noqday is-maan-dhaaf diblumaasiyadeed oo xooggan.
MUQDISHO, Soomaaliya – Xogo hoose, oo Keydmedia Online, ka heshay ilo diblumaasiyadeed, Madaxweynihii hore Farmaajo, ayaa doonaya, inuu u socdaalo dalka Isku-tagga Imaaradka Carabta, maalmaha soo aaddan, si uu cudur-daar uga bixiyo xiriirkii labada dal ee uu ula kaca u xumeeyay markii uu xaafiiska yimid.
Ilaha aan ka soo xigannay warbixintaan, ayaa sheegaya in Farmaajo, tagitaanka Imaaraadka u marayo Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed, oo dhawaan ka soo laabtay Dubai iyo danjirayaal Carbeed, oo aad ugu dhow madaxda Isku-tagga Imaaradka Carabta.
Dhamaadkii bishii Janaayo 2022, Abiy Axmed, ayaa Madaxwyne ku-xigeenka ahna Ra’iisul-Wasaaraha dalkaas, Maxamed Bin Rashid Al-Maktoum, kala hadlay, sidii meesha looga saari lahaa khilaafka gaarka ah ee Farmaajo iyo Dubai, kaas oo soo billowday 2017.
Xogaha KON, soo gaaray, waxa ay tilmaamayaan in Al-Maktoum, uu soo dhaweeyay go’aankaas, hayeeshee, uu Abiy, ku war galiyay in Imaaraadku xilligaan diiradda saarayaan qorshaha Ra’iisul Wasaare Rooble, oo isna dhamaadkii January gaaray dalkaas.
Farmaajo, Fahad iyo Kheyre, waxa ay si daran ula dagaallameen xiriirkii Soomaaliya yo Imaaraadka, kaas oo ahaa soo jireen, waxayna ku beddeleen, Qatar, oo caan ku ah naas-nuujinta kooxda hubeysan, isla-markaana uusan sooyaal hore kala dhaxeyn Soomaaliya.
Kadib, raalli galintii RW Rooble, ee DUBAI, dalka Qatar, ayaa cadaadiska ku siyaadiyay Kooxda waqtigu ka dhamaaday, waxaana lagu wargaliyay in ay wax ka beddelaan istaraatiijiyadda ololaha, taas oo sababtay in Farmaajo raadiyo xiriirka Imaaraadka.
Qatar, oo ku baraarugsan saameynta ay sanadkaan, UAE, ku leedahay doorashooyinka Soomaaliya iyo fashilka siyaasadeed ee Farmaajo wajahay, ayaa Fahad, ku wargalisay inuu xitaa meesha ka saaro dhisidda hal musharrax, si uusan uga bixin Madaxtooyada.
Tallaabadas, waxa ay walaac iyo hubanti la’aan ku abuurtay Farmaajo, waana mid ka mid ah sababaha uu u doonayo inuu deg deg ugu socdaalo Imaaraadka, oo markii hore Qatar awgeed, uga dhigay cadowga ugu weyn ee Dowladda Soomaaliya leedahay.
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed, ayaa hore Muqdisho, uga kaxeeyay Farmaajo, si uu u geeyo Nairobi, isla-markaana, ula heshiiyo Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta, kadib markii sidaan oo kale, oo xiriirka dalkaas u xumeeyay dano shaqsiyadeed.
Shan sano, oo meeshii ugu hooseysay uu gaaray, xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka, hadda waa mid soo hagaagaya, kadib tallaabooyin isku soo dhawey ah oo uu qaaday Rooble, taas oo sababtay in Imaaraadku, diyaarado gargaar, ku soo daabulo dalka.
Rooble, wuxuu ballan-qaaday in dalkaas loo celinayo, lacag garoonka Muqdisho looga qabtay sanadkii 2018-kii, inkastoo wareegto ka soo baxday xaafiiska Farmaajo, lagu sheegay in aaan lacagtaas la celin karin, hayeeshee, uu hadda isagu doonayo inuu celiyo.